Toyota Factory, mpamatsy - mpanamboatra Toyota Toyota
Crankshaft avo lenta avo lenta sahaza ho an'ny RenaultR4
Ny crankshaft fiara avo lenta dia mety amin'ny RenaultE7J
Flywheel fiara avo lenta
Crankshafts Crankshaft fiara feno feno
Camshaft avo lenta
Loha Cylinder avo lenta
Crankshaft fiara kalitao ho an'ny Toyota3RZ
Modely azo ampiharina: Toyota3RZ
Ny crankshaft no singa lehibe indrindra amin'ny motera. Izy io dia mahazaka ny hery ampitain'ny tsorakazo mampifandray ary mamadika azy ho output torque amin'ny alàlan'ny crankshaft ary mitondra fitaovana hafa amin'ny motera hiasa. Ny crankshaft dia iharan'ny herin'ny centrifugal ny volan'ny rotating, ny hery inertial entona miova tsindraindray ary ny hery inertial mamaly, izay mahatonga ny crank bearing iharan'ny famatrarana sy ny torsional entana. Noho izany, ny crankshaft dia takiana mba hanana tanjaka sy henjana ampy, ary ny ambonin'ilay diary dia mila tsy mahazaka akanjo, miasa milamina ary mahay mandanjalanja tsara.
Ny vokatra dia vita amin'ny vy mahery ductile sy vy sandoka, ary tsaboina miaraka amin'ny teknolojia fanamafisana ny tany mba hanatsarana ny tanjaka havizanan'ny crankshaft. Mety amin'ny fiara, sambo, fiara injeniera, milina fambolena, generator io, kalitao tany am-boalohany, miaraka amin'ny bika aman'endriny, matevina avo, malama, famirapiratana ary mateza aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Crankshaft fiara tsotra asa tanana ho an'ny Toyota2Y
Modely azo ampiharina: Toyota2Y
Mba hampihenana ny habetsaky ny crankshaft sy ny hery afovoany ateraky ny fihetsehana dia matetika no banga ilay diary crankshaft. Ny lavaka solika dia miforona eo amin'ny sehatry ny diary tsirairay hanamorana ny fampidirana na fitrandrahana ny menaka maotera hamandoana ny tontolon'ny diary. Mba hampihenana ny fifantohan'ny fihenjanana, ny fitambaran'ny gazety lehibe, ny vatan-kazo ary ny sandry an-doha dia mifandray amin'ny lalan'ny tetezamita.
Ny vokatra dia vita amin'ny vy mahery ductile sy vy sandoka, ary tsaboina amin'ny alàlan'ny teknolojia fanamafisana ny tany mba hanatsarana ny tanjaky ny crankshaft. Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, milina mpamokatra generator, kalitao namboarina, manana endrika tsara, hakitroka, malama, famirapiratana ary faharetana aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Crankshaft fiara avo lenta ho an'ny Toyota2RZ
Modely azo ampiharina: Toyota2RZ
Ny fiasan'ny crankshaft counterweight (antsoina koa hoe counterweight) dia ny fandanjana ny hery afovoany mihodina sy ny heriny, ary indraindray dia afaka mandanjalanja ihany koa ny hery inertial mifamaly sy ny heriny. Rehefa mandanjalanja irery ireo hery sy fotoana ireo dia azo ampiasaina ihany koa ny counterweight hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny fitaterana lehibe. Ny isa, ny habe ary ny fametrahana ny counterweight dia tokony hojerena arakaraka ny anton-javatra toy ny isan'ireo varingarina misy ny motera, ny fandaminana ny varingarina ary ny endrika crankshaft. Ny counterweight dia matetika ampifandraisina amin'ny crankshaft amin'ny alàlan'ny casting na forging. Ny counterweight ny motera diesel matanjaka dia amboarina misaraka amin'ny crankshaft ary avy eo miara-milahatra.
Crankshaft fiara tsara kalitao, mety amin'ny Toyota 2RZ, kalitaon'ny orinasa tany am-boalohany, antoka iray taona. Ny rafitra serivisy aorinan'ny varotra tonga lafatra dia hanome anao fanampiana ara-teknika. Tongasoa ireo mpanjifa eto an-toerana sy any ivelany hanontany sy hitsidika ny ozinay.
Crankshaft fiara tsotra asa tanana ho an'ny Toyota1Y
Modely azo ampiharina: Toyota1Y
Ductile vy crankshaft manodidina ny zoro mihodina fanamafisana dia ho be mpampiasa amin'ny crankshaft fanodinana. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny fanamafisana toy ny zoro boribory fanamafisana miampy famonoana an-tampon'ny haino aman-jery dia ho be mpampiasa amin'ny fanodinana crankshaft. Ny fomba fanamafisana crankshaft vy vita amin'ny vy dia ho bebe kokoa Ny tany dia novonoina tamin'ny diary sy zoro boribory.
Ny orinasa dia manana haitao mandroso sy fitaovana famakafakana sy fitiliana tanteraka. Voalohany amin'ny indostria handalo ISO9001-2000 sy TS16949: fanamarinana rafitra kalitao 2009. Ny fananana raikitra dia 150 tapitrisa yuan. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manarona faritra 20.000 metatra toradroa, velarana 28000 metatra toradroa, mpiasa 180, mihoatra ny 200 setran'ny fanodinana sy fitaovana fitiliana, tsipika famokarana fasika vita amin'ny fasika vita amin'ny vy 2 ary 4 andalana famokarana masinina. Ny fizotry ny famokarana sy ny fomba fitsapana dia manaraka tsara ny fenitra Alemanina.
Crankshaft tsara indrindra ho an'ny Toyota1FZ
Modely azo ampiharina: Toyota1FZ
Ny crankshaft dia iray amin'ireo ampahany mahazatra sy manan-danja indrindra amin'ny motera. Ny asany dia ny fanovana ny tsindry entona ampidinin'ny tsorakazo mampifandray ho lasa torque, izay ampiasaina ho hery hamoahana ny asa, handroahana mekanisma miasa hafa, ary handroahana ireo fitaovana fanampiana ny motera fandoroana anatiny hiasa. Midika izany ny fanafainganana mahery vaika sy ny fihenam-bidy, miaraka amin'ny fihenan'ny fihenam-bidy avo lenta, ny herin'ny herinaratra ary ny hovitrovitra, izay miteraka fihenjanana avo sy miovaova tokoa. Ny fihenjanana tafahoatra toy izany dia mitaky famolavolana sy kajy am-pitandremana, fisafidianana fitaovana sahaza ary teknolojia fanodinana batch.
Ho an'ny crankshafts novokarina betsaka, mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ny tsipika famokarana nitrocarburizing entona mifototra amin'ny azota izay fehezin'ny microcomputer dia horaisina amin'ny ho avy. Ny tsipika famokarana nitrocarburizing entona mifototra amin'ny nitroka dia misy milina fanasan-damba (fanasana sy fanamainana), lafaoro preheating, lafaoro nitrocarburizing, fitoeran-tsolika mangatsiaka, milina fanasan-damba (fanasana sy fanamainana), rafitra fanaraha-maso sy fizarana entona ary rafitra hafa.
Hatramin'ny niorenany, ny orinasa dia nifikitra tamin'ny politikam-pandraharahana "fiantohana kalitao, asa-tanana, serivisy tso-po ary tombontsoa samy hafa", ary natokana hitadiavana fivoarana sy fandrosoana iraisan'ny mpanjifanay, ary fisaorana feno ho an'ireo namana avy amin'ny sehatra rehetra ny fiainana izay manana fanohanana maharitra sy fikarakaran'ilay orinasa!